आर्थिक मद्दत र स्थिरताको लागि प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना आर्थिक मद्दत र स्थिरताको लागि प्रार्थना
आर्थिक मद्दत र स्थिरताको लागि प्रार्थना
आज हामी आर्थिक सहयोग र स्थिरताको लागि प्रार्थनाको साथ व्यवहार गर्ने छौं। कसलाई सहयोगको खाँचो छैन? विशेष गरी जब यो वित्त को लागी आउँछ। हामी सबैलाई पक्कै पनि एक आवश्यक छ। तर स्थिरताको बारेमा के हुन्छ? वित्तीय स्थिरता खोज को रूप मा महत्वपूर्ण छैन आर्थिक सहयोग? हामीले मान्छेको कथाहरू सुनेका छौं जुन कहिँबाट पनि मद्दत प्राप्त भयो, र अचानक, तिनीहरू लोकप्रिय भए कि सबैजनाले उनलाई चिने।
यस बीच, धेरै समय लागेन जब उनीहरूले मूल्यह्रास गर्न थाल्छन्, र अन्तमा, तिनीहरू आफू पहिलेको स्तरमा फर्किए। वित्तीय मद्दतले तपाईंको वित्तीयमा अथाह वृद्धि निम्त्याउछ, तर स्थिरताले तपाईंलाई धान्न सक्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि जब हामी आर्थिक सहायताको लागि प्रार्थना गर्दछौं, तब हामीले स्थिरताका लागि प्रार्थना पनि गर्नुपर्दछ।
स्थिरता अनुग्रह हो जसले मद्दत गर्न उफ्रिन्छ र बाँधमा बढाउँदछ। म तपाईंको जीवन र गन्तव्यको बारेमा आज घोषणा गर्दछु कि तपाईंलाई चाहिएको मद्दतले तपाईंलाई येशूको नाममा आज बसाल्छ। म पनि प्रार्थना गर्दछु कि जब त्यो सहयोग आउँदछ, अनुग्रह जसले यसलाई निरन्तरता दिनेछ र लामो समयसम्म बढ्दै जान्छ, म यो आदेश गर्दछु कि परमेश्वरले तपाईंलाई येशूको नाममा प्रदान गर्नुहोस्। तपाईं आर्थिक सहायता र स्थिरताको साथ प्रार्थनाले के गरेको सोच्दै हुनुहुन्छ। ठीक छ, म तपाईंलाई यो घोषणा गर्न पाउँदा खुसी छु कि आर्थिक सहयोग र स्थिरताको साथ प्रार्थनाको धेरै काम भयो।
भजनहारले भने, “म मेरो टाउकोलाई पहाडहरूमा उचाल्नेछु, मेरो सहायता कहाँबाट आउँदछ? मेरो मद्दत स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनुहुने प्रभुबाट आउनुहुनेछ। यसको मतलब यो हो कि मानिस स्वाभाविक राज्यमा उसले आफैंबाट केहि पनि गर्न सक्दैन उसले माथिबाट मद्दत गरे बाहेक। मद्दत प्राकृतिक छैन, यो ईश्वरीय कुरा हो, र कुनै व्यक्ति प्राप्त गर्दैन जब सम्म यो माथिबाट नदिएसम्म। हुनसक्छ तपाईले धेरै समयदेखि आर्थिक सहयोगको लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ कि बिर्सनु भयो कि वित्तीय स्थिरता पनि आर्थिक सहयोग जत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यो समय बारे हो कि तपाईं यो प्रार्थना सही तरीकाले भन्न थाल्नुहुन्छ।
म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि तपाईको पैसा नष्ट गर्नका निम्ति अust्ग्रेको राज्यबाट आएको सलह र बेंसीको कीराले येशूको नाममा आगोले भस्म पार्यो। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईले भनेको जस्तै, यी निम्न प्रार्थनाहरू आर्थिक मद्दतले तपाईंलाई भेट्टाउनेछ। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, र पश्चिमबाट मद्दत आउनेछ। तपाईं जहाँ जानुहुन्छ, मानिसहरूले तपाईंलाई आशीर्वाद दिन्छन्। र म प्रार्थना गर्दछु कि त्यो सहयोगलाई निरन्तरता दिने अनुग्रह येशूको नाममा आज तपाइँलाई जारी गरिएको छ।
हे प्रभु येशू, म तपाईंको सहयोगको लागि प्रार्थना गर्दछु। बाइबल भन्छ कुनै व्यक्तिले केहि पनि प्राप्त गर्दैन जबसम्म यो माथिबाट दिइएन। म आर्थिक सहयोगको लागि प्रार्थना गर्छु। म बिन्ती गर्दछु कि तपाईं मलाई पुरुष र पुरुष पदार्थको साथ जोड्नुहुनेछ, ती जसको आर्थिक मद्दतले मेरो जीवनलाई गतिशील तरिकाले बदल्नेछ, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईं हामीलाई येशूको नाममा जोड्नुहोस्। बुबा, म त्यो एक सहायकका लागि प्रार्थना गर्छु जुन हजारौं सहयोगीहरू भन्दा ठूलो काम गर्दछ। म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूका नाममा त्यस्ता व्यक्तिलाई मेरो मार्गमा पठाउनुहोस्।
बुबा प्रभु, म वित्तीय स्थिरताको लागि प्रार्थना गर्दछु, यो अनुग्रह जसले मेरो आर्थिक अवस्थालाई सँभाल्छ, अनुग्रहले यसलाई घटाउनबाट रोक्छ। म तपाईं येशू को नाम मा यो मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। म सलह र राक्षसी ईन्कारवर्मको हरेक प्रकारको बिरूद्ध आउँछु जुन मेरो वित्तीयलाई नष्ट गर्न नरकको खाडलबाट पठाइएको हो। म येशूको नाममा शक्ति द्वारा तिनीहरूलाई नष्ट। प्रभु येशू, जब आर्थिक सहायता आउँछ, प्रभुको अनुग्रहले यसले सँधै सहायता गर्छ कि प्रभुले त्यसलाई येशूको नाममा ल्याउनुहुनेछ।
म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि मेरा साथीहरूले गरेका सबै राम्रा कामहरू सहजै गर्दै छन्, म तपाईंसंग बिन्ती गर्दछु कि तिमीले मलाई येशूको नाममा अझ राम्ररी गर्न यो मद्दत गर्नेछौ। मैले अधिग्रहण गर्नु पर्ने प्रत्येक कुरा, हरेक राम्रो उपलब्धि जुन मैले कभर गर्नु पर्ने थियो, तर म आर्थिक सहयोगको अभावले असक्षम पारिएको छु। म आदेश दिन्छु कि आज मलाई येशूको नाममा खोज्न मद्दत गर्दछु।
प्रभु येशू, म मेरो मार्गमा हरेक किसिमका बाधा र अवरोधहरूको विरुद्धमा आउँछु र जसको परमेश्वर तपाईंले मलाई सहायता गर्नु भएको छ। म मेरो सहयोगीलाई येशूको नाममा मद्दत गर्नबाट रोक्न मैले प्रत्येक गढलाई नष्ट गरेको छु। प्रभु येशू, जसरी तपाईं दानियलको प्रार्थनाहरू पठाउनका लागि पठाइएका स्वर्गदूतलाई सहयोग पठाउनुहुन्छ, म पनि प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले आज येशूको नाममा मलाई सहायता पठाउनुहोस्।
प्रभु येशू, म मेरो सहायताको लागि प्रार्थना गर्दछु जसले मलाई छोड्नेछ, जसले मलाई डुब्नबाट बचाउँदछ, म तिमीलाई आज्ञा गर्दछु कि तिमीले येशूको नाममा मेरो बाटो पठाउनु पर्छ। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि यस नयाँ दिनको ढोका खोल्ने दूतले येशूका नाममा आउने दिनका सबै आशिष्‌ र धनलाई निर्देशन दिनेछ।
प्रभु येशू, म मेरो जीवन र सम्पूर्ण प्राण तपाईंमा समर्पण गर्दछु। म तपाइँलाई मेरो पर्स प्रदान गर्दछ; म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले यसमाथि नियन्त्रण राख्नु हुनेछ। म आदेश दिन्छु कि तपाईं मप्रति कृपालु हुनुहुनेछ र येशूको नाममा मेरो बाटो पठाउनुहुनेछ। हे यहोवा, म आर्थिक स्थिरताको लागि प्रार्थना गर्छु। म मद्दत खोज्न चाहन्न र केहि बेरको लागि स्थिर हुन। म स्थिर हुन चाहन्छु, म गरिबीमा फर्किन अस्वीकार गर्दछु, अनुग्रहको निरन्तरताका लागि प्रार्थना गर्दछु, अनुग्रहले मेरो आयको स्वतन्त्र प्रवाहलाई स्थिर गर्नेछ, म तिमीलाई आज्ञा गर्दछु कि तिमीले येशूको नाममा मेरो बाटो पठाउने छौ।
प्रभु, म जीवनमा दरिद्र हुन चाहन्न, म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंले मेरा हातहरू सम्पत्ति बनाउनमा आशीर्वाद दिनुहुनेछ, र म अबदेखि मेरा हातहरू राखी जे पनि सफल हुन्छु भनेर आदेश गर्दछु। यदि म व्यापार गर्दछु, प्रभु कृपया मलाई धेरै नै लाभ कमाउन दिनुहोस्, जब म कुनै संस्थामा काम गर्दछु, कम्पनी फस्टाउन दिनुहोस्, मेरो व्यवसाय येशूको नाममा धन्यबाद होस्। प्रत्येक किसिमका भोक गर्नेहरू, म आदेश दिन्छु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आगो तपाईंमाथि अब येशूको नाममा आउँदछ। जहाँ म कम्तिमा आशा गरेको ठाउँमा पनि, येशूको नाममा मेरो लागि मद्दत उत्पन्न होस्।
अघिल्लो लेखमाघर र परिवारको सुरक्षाको लागि प्रार्थना
अर्को लेखमावित्तीय चमत्कारको लागि बिहान प्रार्थना
शिमसन एनसे अक्टूबर 5, 2020 मा 10: 17 बिहान
कस्तो अद्भुत प्रार्थना पोइन्ट। ईश्वरले तपाईलाई आशिष् दिऊन् र तपाईको तटलाई येशूको नाममा - आमेन।
म साँच्चिकै भगवान्ले मलाई आर्थिक आशीर्वाद दिनुहुन्छ र यसलाई निरन्तरता दिन अनुग्रहको साथ मद्दत गर्नुहुन्छ।
अन्तर्वार्ताको लागि जानु अघि प्रार्थना बिन्दुहरू
गुड नाइट स्लीप को लागी शक्तिशाली प्रार्थना बिन्दुहरु
२० प्रार्थनाले आध्यात्मिक अन्धकारको विरुद्धमा औंल्याउँछ